Daawo Sawirada ” Qaabkii ay maanta u dhacday Munaasabadii ay xilka kula kala wareegayeen Muungaab iyo Tarsan | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Daawo Sawirada ” Qaabkii ay maanta u dhacday Munaasabadii ay xilka kula...
Daawo Sawirada ” Qaabkii ay maanta u dhacday Munaasabadii ay xilka kula kala wareegayeen Muungaab iyo Tarsan
Xaflad Xil wareejinta Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa maanta lagu qabtay xarunta KMG ah ee maamulka Gobolka Banaadir.
Waxaa ka soo qeyb galay xubnaha labada gole oo uu hogaaminaayay wasiirka Arrimaha Gudaha, La taliyaha madaxweynaha ahna Afhayeenka madaxtooyda JF Soomaliya, Odayaasha dhaqanka, qeybaha bulshada rayidka, Imaamyo iyo Ugaasyo, haweenka, dhalinyarada, culimada iyo waxgarad badan, ayaa waxaa xilalka kula kala wareegayay guddoomiyahii hore ee maamulka Gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, iyo Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab
Qeybaha bulshada oo hadalo kooban kasoo jeediyay munaasadaasi ayaa ku amaanay maamulkii Tarsan howshada adag ee uu Muqdisho ka soo qabtay, iyagoo u rajeeyay maamulka cusub ee mudane Mungaab iney halkiisa ka sii wadaan.
Duqii hore ee Muqdisho ahaana guddoomiyahii gobolka Banaadir mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, isagoona ku dheeraaday waxqabadka maamulka gobolka iyo kan dagmooyinka Muqdisho, iyo sidey aheyd xaalada markii xilka loo dhiibayey bartamihii sanadkii 2010. Isagoona carrabka ku adkeeyay wada shaqeyntii wacneyd ee maamulada dagmooyinka iyo dhamaan shaqaalaha gobolka Banaadir, wuxuuna kula dardaarmay dhamaan iney si wanaagsan ula sii shaqeeyaan maamulka cusub ee mudane Mungaab.
Jawiga xaflada oo ahaa mid qaban qaabo weyn loo galay islamaraana ay ka muuqdeen farxad badan ayaa waxaa qudbad dhinacyo badan taabaneysa jeediyay Guddoomiyaha maamulka Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab.
Qudbada oo aheyd mid qiimo badan ayuu guddoomiyuhu ku sheegay in hadafka koowaad ee maamulka Gobolka Banaadir ku shaqeyn doono ay tahay
amniga, wuxuuna si dhiiran u sheegay in dhamaan hayadaha amniga gobolka Banaadir sida taliska Police ka qeybta guud ee gobolka iyo taliska Hayadda Nabad sugidda iyo sirdoonka Gobolka Banaadir iney si toosa u hoos imaadaan guddoomiyaha gobolka, si loo sii adkeeyo sugidda amniga caasimadda.
Mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa sidoo kale balan qaaday inuu wax weyn iska badali doono amniga caasimadda asagoo kaashanaya haydaha amniga gobolka iyo qeybaha bulshada shacabka Muqdisho.
Nadaafadda magaalada ayuu sidoo kale sheegay mudane Muungaab iney noqon doonto ahmiyad kale oo maamulka Gobolka u qorsheysan, si loo kordhiyo adeega bulshada, iyo soo celinta bilicda Muqdisho.
Xasan Maxamed Xuseen Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa si cad usheegay ineysan dhici doonin kala heysiga hantida dadweyanha, wuxuuna balan qaaday in maamulkiisu gacan bir ah ku qaban doono kuwa heysta guryaha islaameed ee ku yaalla caasimadda Muqdisho.
Wuxuuna gabagabadii khudbadiisa qiimaha badneyd ee mudane Xasan Maxamed Xueen Mungaab uu maanta ka jeediyay xafladdii xil wareejinta, inuu u mahadcelinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo wasiirka arrimaha gudaha.
C/llaahi Goodax Barre wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka oo xafladda soo xiray ayaa uga mahadceliyay mudane Tarsan sida qiimaha badneyd ee uu usoo hogaamiyay waqtiga uu talada gobolka Banaadir hayay, isagoona sidoo kale guul urajeeyay maamulka cusub ee mudane Mungaab.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo fedraalka ayaa dhanka kale ugu baaqay qeybaha shacabka Muqdiso iney si wanaagsan ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir.
Previous articleQaylo Dhaan lagu dalbanayo sii deynta TIICEEY oo lagu qabtay magaalada Minneapolis
Next articleNOLOSHAADU QIIME AYEY LEEDAHAY!